ठ्याक्कै बार्ह बजे विस गरेँ ! एइछिनमा उसको टाइमलाईनमा एउटा पोस्ट देखेँ , जुन पढेर मन खल्बल्लियो लेखिएको थियो “डियर ! माइ लभ !❤️❤️ स्पेसल डे फर मी इट्स योर बर्थ्डे ! सधैँ खुसी रहनु ! धेरै कुरा फोनेमा भनिसकेको छु अनि मेसेजमा लेखिसकेको छु त्यसैले धेरै लेख्न चाहिनँ ! स्टे ब्लेस्ड ! योर मुटु लभ्स यु अ लट !😘😍 ”
फ्रेब्ररी ७ को रात थियो निद्रा थिएन् ! मोबाइलमा फिल्म हेरेर बसेको थिएँ मोबाइलमा घन्टी बज्यो ! उसको मेसेज रहेछ ! रातको ठ्याक्कै १२ बजेको थियो ! खोलें, सुरु गरेँ पढ्न ! लेखिएको थियो , ” आभास धेरै कुरा छ तिमीलाई भन्नू पर्ने ! मनमा अनेक कुरा छन तिमीलाई भन्न भनेर साँचेका ! थाहा छैन तिमीलाई मेरो कुराले के हुन्छ , कस्तो असर पार्छ , अनि यो पनि थाहा छैन तिमीलाई मेरो कुरा मन पर्छ या पर्दैन ! मेरो कुराले तिमीलाई कति चोट देला , नराम्रो लाग्ला त्यसको लागि म पहिला नै तिमीलाई सरी भन्न चहान्छु ! आभास कलेजका दिनहरुमा तिमी जस्तो पनि साथी हरु हुन सक्छन भनेर मैले कहिल्यै कल्पना पनि गरेको थिइनं, ! कोहि कसरी यति प्यारो हुन सक्छ ? कोहि कसरी यति सहयोगी हुन सक्छ ? कोहि कसरी यति धेरै बिश्वासिलो हुन सक्छ आभास ? मेरो हरेक कुराको ख्याल हुन्थ्यो तिमीलाई , के गर्दै छु को सँग छु ठिक छ कि छैन मलाई केही आवश्यक छ कि छैन ? तिमी कति धेरै सहयोगी छौ है आभास , यति सम्म कि क्लासमा केही फोटोकपी गर्नु हुँदा तिमी मेरो लागि पनि किनेर ल्याइदिन्थ्यौ, आफूलाई पेन किन्दा मेरो लागि पनि किनेर ल्याइदिन्थ्यौ , कति हो कति पटक मेरो प्र्याक्टिकलको ड्रइङ नि बनाइदिन्थौ ,मेरो बाबा बितेर म कलेज न आएको बेलामा मेरो सबै नोट पनि गरिदिएका थियौ 😢😢 म एकदिन कलेज न आउँदा सबैभन्दा बढी चासो तिमीलाई हुने गर्थ्यो आभास ! क्लासमा कसैले मेरो बारेमा नराम्रो भन्दा सबैभन्दा पहिला मुख बन्द गराउने तिमी हुन्थ्यौ आभास ! कलेजको हेड बोइ भएर सबैको अघि तिमीले हरेक चोटि बोल्दै गर्दा कहिले आँसु निकालिदिन्थौ , कहिले ओठमा हाँसो ! तिम्रा ती सब्दहरुको बयान पूरा कलेजले गर्ने गर्छ , तिम्रो लिडरसिप क्वालिटिको बर्णन पूरा कलेजले गर्ने गर्छ ! कहिँ क्यान्टिनमा जाँदा पनि तिम्रै कुरा भइ रहेको सुन्दा छाती गौरबले चौढा हुने गर्छ आभास ! मेरो सबैभन्दा प्यारो साथि आभास छ भनेर! कलेजमा तिम्रो फ्यान नभएको कमै होलान आभास त्यसमध्य पनि सबैभन्दा ठूलो फ्यान म हुँ आभास ! तिम्रो जति हक अरु कसैको छैन ममा ! तिमी मेरो लागि प्रेरणा को स्रोत हौ आभास ! यु आर माइ इन्पिरेसन ! ओ कालू ह्यान्डसम ! कति तिता मिठा कुराहरु भए हामी बिच तर हामी कहिल्यै छुट्टिएनौँ , तिमी कहिल्यै टाढा भएनौ म बाट मैले जे जे भन्दा नि तिमीले देखायौ , एउटा असल साथिको परिभाषा !म स्वार्थी भएँ नसोच आभास ! अरु कसैसँग रिलेसन टुटेर मसँग नजिक हुन खोज्यो नसोच आभास ! तिमीलाई जति इज्जत म कसैलाई गर्दिन ! तिम्रो लागि यो मनमा जति सम्मान छ नि म उतार्न सक्दिन सब्दमा तिनलाई ! इभन मेरो मामु पनि तिम्रो फ्यान हो , तिम्रो ब्याक्तीत्वको ! तिम्रो लागि जति लेखे पनि कमै हुन्छ ! थाहा छैन तिम्रो मनमा के छ मेरो लागि , यो पनि थाहा छैन के सोच्छौ मेरो बारेमक बट आइ रेसपेक्ट यु , तिमी मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ , आइ लभ यु आभास ! ❤️ बरु नो भन तर मबाट टाढा नहोउ है आभास , मलाई तिम्रो फ्रेन्डसिपको साथ अझै चाहिन्छ बाँचुन्जेल ! ”
रंगखबर, काठमाडौँ – राजधानीका चर्चित रंगमंचमा महिला रंगकर्मी माथि भैरहेको यौन दुर्व्यबहारको खुलासापछि २ जना